အခမဲ့များအတွက်စမတ်တင်ပေးသူ | APK ကိုအန်းဒရွိုက်သည် Download
ပင်မစာမျက်နှာ » အားလုံး Apps ကပ » စမတ်ဖွင့်တင်
စမတ် Launcher ကို APK ကို
စမတ်တင်ပေးသူတစ်ဦးရိုးရှင်းသောဒီဇိုင်း, အနိမ့်မှတ်ဉာဏ်အသုံးပြုမှုနှင့်သင်အနည်းငယ်ဘုံဘိုင်နှင့်အတူမည်သည့် application ကိုစတင်ပါကုန်အံ့တစ်ခုအသုံးပြုသူ-ဖော်ရွေ UI ကိုအားဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာတစ်ရပ်ဆန်းသစ် launcher ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါဟာလက်ရှိထည့်သွင်း apps များ၏အင်္ဂါရပ်များအလိုအလျှောက်ကက်တလောက်ဆော့ဖ်ဝဲမှစတိုးဆိုင်ပေါ်တွင်သာ launcher ပါ!
အဆိုပါစီမံကိန်းကိုသာငါ့အားဖြင့်ဖွံ့ဖြိုးပြီး, ဒါကြောင့်သင်ပိုကောင်းစမတ်ဖွင့်တင်အောင်ဘယ်လိုမဆိုစိတ်ကူးရှိသည်သို့မဟုတ်သင်ငါ့ကိုပြသနိုင်ဖို့တချို့ mockup ရှိပါက, အီးမေးလ်ဖြင့်ငါ့ကိုဆက်သွယ်ပါသည်။
သငျသညျဒီ app ကိုကြိုက်နှစ်သက်ပါလျှင်ပိုပြီး features တွေများအတွက် PRO version ကိုဝယ်ယူရန်နှင့်စီမံကိန်းကိုထောကျပံ့ဖို့စဉ်းစားပါ!
အနည်းဆုံး featured အောက်မှာ-မဟုတ်နည်းလမ်းမ!
- Quick Start အတူပင်မမျက်နှာပြင်
- အထူး configurations မရှိဘဲသုံးစွဲဖို့အဆင်သင့်ဖြစ်ပြီလား။
- တိုက်ရိုက် Wallpaper နှင့်ကွဲပြားခြားနားသောအရွယ်အစား၏ screen များအတွက်ပံ့ပိုးမှု။
- Widget လေးထောက်ခံမှု (သာ PRO ဗားရှင်း)
- Launcher ကို Pro ကို, ADW Launcher ကို, Apex များအတွက် icon များ၏အစု၏ပံ့ပိုးမှု
- သင်ရှည်လျားကို select လုပ်ပါ menu ကသို့ဖြစ်လျှင်, app တစ်ခုကိုနှိပ်ခြင်းဖြင့်သင်အလိုရှိတိုင်း app ကိုဖုံးကွယ်နိုင်သလဲ ဝှက်။
- ကို Global ဆောင်ပုဒ်ယခု UI ကိုအမှုအမျိုးမျိုးရှိသမျှ element တွေကိုပြောင်းလဲနိုင်ပါတယ်။
- app ကိုဖွင့်အချက်အလက်ကိုလွယ်ကူစွာ access ကို။
- အခင်းအကျင်း mode ကို။
- ထို statusbar ဖျောက်ရန် Option ကို။
Creative Launcher …
ii င့်တင်ပေးဘို့ ...
Q အတွက် Q Launcher
Oppo တင်ပေးသူ - ...
X Launcher - …
S9 တင်ပေးသူ - SS ...
ဟူး Kumar က suryvanshi says:
စက်တင်ဘာလ 17, 2019 မှာ 12: 22 ညနေ
ရော်ဘင် Pitmann က says:
ဧပြီလ 18, 2018 မှာ 2: 16 နံနက်
ငါလအနည်းငယ်အဘို့ဤ app ကို အသုံးပြု. နှင့် like နှိပ်ပြီ။ ရုတ်တရက်ကျွန်မသွားမည်ဖြစ်ပြီးပြန်လည်စတင်ဖို့ညွှန်ကြားချက်ရရှိခဲ့နှင့်ဒါလုပ်နေတာပြီးနောက်, ငါ့ app များကိုထိုကဲ့သို့သောစသည်တို့ကိုခရီးသွား, ဖျော်ဖြေရေး, utility ကို, အဖြစ်အမျိုးအစားအလိုက်ဖွဲ့စည်းမြင်နေမဟုတ်ငါဘယ်လိုဒီစွမ်းရည် restore မှငါ့ကိုမပြောပြပေးပါ။ ငါအမျိုးအစားမရှိဘဲဤ app ကိုမလိုချင်ကြဘူး။
Deepak kumar paakad says:
မေလ 25, 2017 မှာ 9: 52 နံနက်
ဧပြီလ 26, 2017 မှာ 8: 55 ညနေ
အကြီးအဖွင့်တင်ပေးအထူးသဖြင့်ငါ ... Jarvis launcher ကြိုက်တယ်။
ရေတစ်စက် (AS) says:
စက်တင်ဘာလ 7, 2014 မှာ 5: 37 ညနေ
၎င်း၏ goooo ............ .ooooD
သြဂုတ်လ 13, 2014 မှာ 7: 31 ညနေ
Rochelle ordiz says:
သြဂုတ်လ 1, 2014 မှာ 3: 39 နံနက်
ငါသည်ဤ launcher ကိုချစ် ... အပန်းခရမ်းရောင်ဆောင်ပုဒ်နှင့်၎င်း၏ ssooooo ချစ်စရာသုံးပြီး .im !!! ♡♥♡
ဇူလိုင်လ 8, 2014 မှာ 1: 30 ညနေ
မေလ 26, 2014 မှာ 8: 19 ညနေ
sibu Koch says:
ဧပြီလ 29, 2014 မှာ 1: 15 နံနက်
ဧပြီလ 26, 2014 မှာ 1: 26 ညနေ
မတ်လ 5, 2014 မှာ 1: 17 ညနေ
ဒီ site ကျနော်တို့ပါရမီသစ်ဖောက်ဒီမျိုးဆက်မှာထေူ၏။
ဖေဖေါ်ဝါရီလ 1, 2014 မှာ 6: 36 နံနက်
ဝိုး ! ဒီ app ကိုနိုင်အောင်အေးမြပါ! ငါ့စမတ်ဖုန်းအလွန်လှပသောစေသည်, ယောက်ျားတွေကကြိုးစားပြီး
ဇန်နဝါရီလ 14, 2014 မှာ 9: 14 ညနေ
ဘယ်သူ့ကိုမှဒီ launcher များအတွက်တိုက်ရိုက်နောက်ခံပုံများအကြောင်းငါ့ကိုပြောပြနိုင်မလား ?? ကိုယ်ကဒီ launcher မှာတိုက်ရိုက်ဝေါလ်ပေပါကို install ဖို့လိုအပ်ပေမယ့် install လုပ်နိုင်ခြင်း
ဒီဇင်ဘာလတွင် 23, 2013 မှာ 4: 29 ညနေ
ကိုယ်ကဒီကအကောင်းဆုံး site ကိုထင်
နိုဝင်ဘာလ 26, 2013 မှာ 11: 17 နံနက်
ငါကမင်းကိုတွေ့မြင်ဟာ android များအတွက်အကောင်းဆုံးက်ဘ်ဆိုက်ဖွင့်စဉ်းစား
နိုဝင်ဘာလ 20, 2013 မှာ 10: 09 ညနေ
ဒါကအားလုံးဟာ android user အတွက်ကြောက်မက်ဘွယ် site ကိုဖြစ်ပါတယ် ..
နိုဝင်ဘာလ 4, 2013 မှာ 2: 41 ညနေ
အောက်တိုဘာလ 27, 2013 မှာ 1: 53 ညနေ
Awesome ကို launcher
သြဂုတ်လ 29, 2013 မှာ 9: 20 နံနက်
nice app ကို
သြဂုတ်လ 6, 2013 မှာ 4: 53 ညနေ